निरक्षर भावी र हाम्रो निधार ~ brazesh
निरक्षर भावी र हाम्रो निधार
August 14, 2011 नेपाली, बायाँ फन्को, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
बायाँ फन्को ६५
यो हामी सबैले नै भोगेको कुुरा हो । साधारणतया केही समयको अन्तरालमा भेटिने साथीभाइ वा परिचितहरुका केही निश्चित प्रश्न हुने गर्दछन् । नयाँ नौलो के छ, आजकल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ र नयाँ योजना के छ ? नियमित औपचारिकताका लागि सोधिने यस्ता प्रश्नहरुको नियमित नै उत्तरहरु हुने गर्दछन् । नयाँ नौलो के भन्ने प्रश्नको सही उत्तर दिने हो भने त्यो निकै लामो हुन सक्छ । किनभने यो संसार, हाम्रो समय र प्रत्येक निमेषनिमेषमा केही न केही नयाँ र नौलो नै भैरहेको हुन्छ । एक क्षण र अर्को क्षणको बीचमा नै कति नयाँ नौलो भैसकेको हुन्छ । त्याृ सबै न त हामीले हेक्का राख्न सक्छौं, न त त्यसको वखान गर्न सक्छौं । तै पनि हरेक मान्छे अर्को मान्छेलाई त्यही सोध्छ र उत्तर दिने मान्छे ओठ लेप्राएर भन्छ,
उही त हो नि, के नयाँ हुनु ।
अनि ऊ आफ्नो जुन जीवनशैली छ, त्यसको संक्षिप्त व्यहोरा पेश गरेर पन्छिन्छ । हामी सबैको आआफ्नै व्यक्तिगत जीवनचर्या छ, उद्देश्यहरु छन्, आकांक्षाहरु छन् अनि छन् भावी योजनाहरु । जीवनको एउटा नियमिततामा हामी सबै आआफ्नो ढंगले जेलिएका हुन्छौं । यो क्रममा हामी यति अभ्यस्त भैसकेका हुन्छौ, हामीलाई त्यसको बारेमा सोच्ने आवश्यकता पनि हुँदैन, फुर्सद पनि । हामी बिहानलाई दिन, दिनलाई साँझ र साँझलाई रात बनाइरहेका हुन्छौं । त्यही क्रममा हाम्रा हप्ता, महीना र वर्षहरु बिताइरहेका हुन्छौं । बेलाबेलामा यो नियमितताबाट केही बेर बिश्राम लिएको बेला हामी झल्याँस्स हुन्छौं, ओहो समय कति छिटो बितिसकेछ । कसैसंग प्रेम भएको, विछोड भएको, बिवाह भएको, जागीर खाएको, सन्तान लाभ भएको, कसैको निधन भएको, कतै घुम्न गएको, कुनै महत्वपूर्ण घटना दुर्घटना घटेको, कुनै उपलव्धि हासिल गरेको वा कुनै कुरामा असफल भएको दिनलाई सम्झेर हामी त्यसो भन्छौं । चाहे जेसुकै भएको होस्, आफैले आँखा चिम्लेर खुट्टा तनक्क तन्काएर अन्तिम सास नफेरुन्जेल मान्छेको जीवन एउटा नियमित गतिमा चलि नै रहन्छ । मान्छेले जिन्दगीमा हरेक कुरासंग सम्झौता गर्न सिक्छ । कसैले नयाँ योजना के छ भन्ने प्रश्न गर्दा दिनका लागि हामी सबैसंग केही न केही उत्तरहरु हुन्छन् । आफ्नो आफ्नो जीवनशैली, गच्छे, वा सोच अनुसार हामी केही न केही खाका कोरिदन्छौं । कहिलेकहीं आफ्ना पूरा हुन नसकेका सपना, गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको तर विविध कारणवश सम्भव नहुने भनेर थाहा भएका कुराहरु पनि हामी त्यस्तो बेला गरिदिन्छौं । एकै छिन आफूलाई भुलाउन यस्ता आशावादी सोचले क्षणिक रुपमा सघाउ नपु¥याउने पनि हैन ।
हामी सबैलाइ थाहा भएको कुरा हो, यस संसारमा कुनै पनि कुरा निश्चित हुँदैनन् । पाखण्डीहरुले जति नै फूर्ति लगाए पनि भविष्य भन्ने कुरा कसैले देख्न नसक्ने कुरा हो । अर्को मिनेट वा सेकेण्डमा के हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा हुँदैन । तर पनि हरेक मान्छे आफ्नै दीर्घकालीन योजनाहरुको तानाबाना बुनेर बाँचेको हुन्छ । जिन्दगीको यो भन्दा बढी उदेकलाग्दो र रोचक पक्ष हरु के हुन सक्छ र ? मान्छेको यही दीर्घकालीन योजना बनाउने, त्यसलाई पच्छ्याउने, एकोहोरिएर लाग्न सक्ने बानीका कारण नै ऊ श्रृष्टिका अन्य जनावरहरु भन्दा विशिष्ट, विकसित, सभ्य र सुसंस्कृत प्राणी बन्न सफल भएको हो । त्यसैकारण मान्छेले उदेकलाग्दा उपलव्धिहरु गरेको हो । त्यसैले त प्रकृतिले पखेटा नदिए पनि उड्न सक्छ मानिस । हावामा बाँच्ने प्रणालीको शारीरिक संरचना भए पनि महासागरहरका गहिराइमा डुव्न सक्छ मानिस । मानिस अन्तरिक्षमा बरालिन सक्छ, पृथ्वीको भूगर्भको खोजी गर्न सक्छ । हावामा भएका अदृश्य, स्पर्शबिहीन, गन्ध बिहीन र कुनै पनि इन्द्रियहरुले भेउ पाउन नसक्ने तरंगहरुलाई आफ्नो कव्जामा लिएर दूरसंचारका कल्पना पनि गर्न नसक्ने माध्यमहरुको विकास गर्न सक्छ मानिस । संसारका विकसित राज्यहरुको कुरा गर्ने हो भने यही दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्ने र तिनलाई साकार बनाउन सक्ने खूबीका कारण नै ती राज्यहरु आजको स्थानमा छन् । खेलकूद, कला, भौतिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, औद्योगिक उपलव्धि, उन्नत प्रविधि, आर्थिक समुन्नति जस्ता कुराहरु उनीहरुले मानिसको यही क्षमताबाट नै आर्जेका हुन् । राष्ट्रले विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरुका यही क्षमतालाई पहिल्याएर, मलजल गरेर, त्यसलाई फस्टाउने बातावरण सिर्जना गरेर त्यसको सामूहिक प्रतिफलका कारण आफूलाई अघि बढाउँछ, माथि पु¥याउँछ । तिनका लागि कुनै अर्को ग्रहबाट आएका जीवहरुले काम गरिदिने होइनन् । ती पनि हामी जस्तै मान्छेहरु नै हुन् ।
हाम्रो विडम्वना भनेको चाहिँ के भने आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठ्ने, तुरुन्तैका फाइदा बेफाइदालाई मात्र सर्वोपरि नठानी भावी दिनका लागि सोच्ने संस्कार भएकाहरु कहिले पनि यो देशको सारथी भएनन् । के त्यस्तो नेतृत्व यो माटोमा फल्नै नसक्ने हो त ? भनिन्छ मान्छेले इतिहासका गल्तीहरु केलाएर तिनबाट पाठ पढ्न सक्नुपर्छ । तर हामी अहिले इतिहासका गल्तीहरु मज्जासंग केलाइ त रहेका छौं, तिनका लागि कसलाई जिम्मेवार ठह¥याउने भनेर निरर्थक वादविवाद पनि गरिरहेका छौं परन्तु पाठ पढिरहेका छैनौं । हामी तिनै गल्तीहरुलाई अरु कुनै नयाँ रुप र नाम दिएर आफै पनि दोहो¥याइरहेका छौं । हामीसंग दश वर्षका त कुरै नगरौं दश महीनाका योजना पनि छैनन् । हामी त वर्षौं बितिसक्दा एउटा सम्विधान समेत बनाउन सकिरहेका छैनौं । अज्ञानीलाई सिकाउन सकिन्छ तर सबै थोक थाहा भएर पनि मूढको अभिनय गर्नेको कुनै ओखति बनेको छैन । समस्या नचिन्नेलाई समस्या यो हो भनेर देखाउन सकिन्छ तर जसले सबै कुरा देखेर पनि आफूलाई अन्धो बनाउँछ, त्यस्तालाई लगाउने कुनै चश्मा कहाँ पाइन्छ र ?
समस्या भनेको पन्छाउने कुरा होइन, सुल्झाउने कुरा हो भन्ने चेत नभएका मानिसहरुलाई हामीले कलम थमाएका छौं, भावीको दर्जामा ती अक्षर नचिन्नेहरुलाई राखेका छौं र तेस्र्याएका छौं तिनका सामु हाम्रो निधार । आज भनेको भोलिको इतिहास हो । यो भूल हामीले अहिले नै नसुधार्ने हो भने, आफूलाई झक्झकाएर नहेर्ने हो भने जसरी आज हामी हिजोका खलनायकहरुको टाउकामा दोष थोपरेर आफूलाई ढाँटिरहेका छौं, भोलिकाहरुले ती खलनायकहरुको सिंहासनमा हामीलाई पनि राख्नेछन् ।